Ako avy amin’ny tontolon’ny bilaogy Toniziana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2018 16:22 GMT
Manoratra momba ny fanabeazana any Tonizia i Tarek, mikasika ny maha-maimaim-poana izany amin'ny sehatra rehetra, sy ny fomba fiheviny fa haitraitra fotsiny izany ao amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana tsy mahavita izany akory. Mihevitra izy fa tokony hampidirina ao amin'ny rafi-pianarana ambony Toniziana ny saram-pianarana mba hanampy amin'ny famatsiam-bola ny fikarohana, mandoa karama tsara ho an'ny mpampianatra, mampihena ny trosan'ny firenena ary mampianatra ny mpianatra mba hiantehitra bebe kokoa amin'ny tenany sy hiasa mafy kokoa.
Nipoitra ny lohahevitra iray hafa mampiady hevitra rehefa nanoratra mikasika ny fomba fijeriny i Mars fa tokony hanatsara ny fifandraisana amin'i Isiraely i Tonizia. Mihevitra izy fa ny Toniziana, amin'ny maha-olombelona, dia tsy manana fankahalana amin'ny Israeliana. Milaza ihany koa izy fa andraikitry ny firenena ny miaro sy manome tolotra ho an'ny Toniziana rehetra na any Tonizia na any ivelany ary mampatsiahy fa nifindra monina tany Israely ny Jiosy Toniziana an'arivony ary tokony hodinihina.
Swifty manoratra momba ireo tetikasa teknolojiam-baovao Arabo sasany mba hamoronana fitenim-pandrafetana (“langage de programmation”) sy rafi-piasana amin'ny teny Arabo manontolo, izay niasan'ny Al Khawarezmi, vondrom-piarahamonina teknolojiam-baovao Arabo, sy ny eritreriny fa hevitra tsara izany.
Mochekes milaza amin'ireo mpianatra fa ny hoe filàna diplaoma eny amin'ny oniversite mba hahazoana asa dia somary lainga, ary ny tena ilaina tokoa dia ny fifandraisana, ny fitiavana ny asanao, ny fahafantaranao ny fivoarana, ny fahaizana mifandray tsara, manao izay ilaina ary eo amin'io fotoana io.